WestJet waxay hadda uga baahan tahay dhammaan shaqaalaha dhammaan tallaalka COVID-19
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » WestJet waxay hadda uga baahan tahay dhammaan shaqaalaha dhammaan tallaalka COVID-19
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Kanada • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Shaqaalaha ku guuldareysta inay xaqiijiyaan heerka tallaalkooda marka la gaaro Sebtember 24 ama gaara heerka tallaalka oo buuxa Oktoobar 30, 2021, waxay la kulmi doonaan fasax aan la bixin ama joojinta shaqada.
WestJet waxay ku dhawaaqday tallaal khasab ah dhammaan shaqaalaha.
Heerka tallaalka oo buuxa ayaa sidoo kale looga baahan doonaa dhammaan shaqaalaha mustaqbalka.
Siyaasadda cusub ee tallaalku waxay dhaqangelaysaa laga bilaabo Oktoobar 30, 2021.
Kooxda WestJet ayaa maanta ku dhawaaqday in laga bilaabo Oktoobar 30, 2021, dhammaan shaqaalaha WestJet Group laga doonayo in si buuxda looga tallaalo COVID-19. Intaa waxaa dheer, heerka tallaalka oo buuxa wuxuu shuruud u noqon doonaa shaqaalaysiinta dhammaan shaqaalaha mustaqbalka ee ay kiraysteen Kooxda WestJet.
“Ilaalinta caafimaadka iyo badbaadada martideena iyo shaqaalaheena ayaa weli ah ahmiyada koowaad ee aan leenahay tallaalkuna waa difaacayaga ugu fiican,” ayuu yiri Mark Porter, WestJet Madaxweyne-ku-xigeenka Fulinta ee Dadka. “Duulistu waxay ahayd mid ka mid ah warshadaha ugu dhibka badan waxaanan aaminsanahay in loo baahan yahay in dhammaan shaqaalaha WestJet Group la tallaalo waa wax sax ah oo la sameeyo oo la hubiyo safarka ugu ammaansan iyo jawiga shaqada ee qof kasta oo ku nool dunida WestJet.”
Kooxda WestJet ayaa qiimeyn doonta oo dejin doonta shaqaalahaas aan awoodin in laga tallaalo COVID-19 ha ahaato caafimaad ama ka-dhaafitaan kale. Shaqaalaha ku guuldareysta inay xaqiijiyaan heerka tallaalkooda marka la gaaro Sebtember 24 ama gaara heerka tallaalka oo buuxa Oktoobar 30, 2021, waxay la kulmi doonaan fasax aan la bixin ama joojinta shaqada. Iyada oo qayb ka ah waajibaadkeeda tallaalka, shirkadda diyaaradu ma bixin doonto baaritaan beddel u ah tallaalka.
Porter oo sii socda, “Kooxda WestJet waxay weli ka go'an tahay inay dib u dhisato xitaa si ka sii xoog badan si loo hubiyo in warshadaha duulimaadyada ee tartamaya ee Kanada. U baahan dhammaan shaqaalaha in laga tallaalo COVID-19 waxay lama huraan u tahay dib-u-bilaabashada badbaadada leh ee Kanada oo dhan. ”
Tan iyo bilawgii masiibada kooxda WestJet Group ee Shirkaduhu waxay dhiseen qaab -dhismeedyo kala duwan oo ah tallaabooyin badbaado si loo hubiyo in dadka Kanada ay sii wadi karaan inay si ammaan iyo mas'uuliyad leh u safraan iyagoo u maraya ballan -qaadka Badbaadada ee Shirkadda. Intii lagu jiray waqtigan, WestJet waxay ilaashatay maqaamkeedii mid ka mid ah 10-ka ugu sarreeya duulimaadyada waqtiga-fog ee Waqooyiga Ameerika sida lagu magacaabay Kiriyaam.
John Sneddon wuxuu leeyahay,
September 9, 2021 at 05: 11
Waa maxay shirkad xun oo aad tihiin, waxaan rajaynayaa in qaab -dhismeedkaaga fashiistu uu fashilmo